Solon-tsakafo ho an'ny karazana hoditra sy dity China Manufacturer
Description:Solon-tenan'ny solosaina,Fikarakarana hikaroka ho an'ny fiara,Care Solution Leather
Home > Products > Olana fikarakarana fiara > Ny vahaolana amin&#39;ny fikarakarana ny hoditra > Solon-tsakafo ho an&#39;ny karazana hoditra sy dity
Karazan-tsakafo hoditra hoditra:
1. Manakana ny fanimbana ny hoditra.
2.Fihinana sakafo, tsy manimba ny hoditra.
Ity vokatra ity dia ampiharina amin'ny sehatra fiara eo amin'ny sehatry ny fiara, ny fametrahana fotoana lavalava amin'ny kibon-kery sy ny fiposahan'ny masoandro, dia hiverina tsikelikely ny loko tany am-piandohana, mangatsiatsiaka, na voapoizina, mahatsapa kokoa, afaka mamerina haingana ny faritra simba leather.regain ny hazavana ao amin'ny orinasa,
Takelaka manify, manify, ary lalina kokoa, Atsaharo ny famoretana indray.
1. Esory ny seza madio amin'ny lamba famaohana
2. Mialà sasatra mialoha ny fampiasana ny vokatra, dia mitsofa eny amin'ny seza.
3. Manaova fofona amin'ny lamba maina ary mafana.
Ny voka-dratsiny: rano matavy
Fiarovana hoditra fikoloana fiara Contact Now
Arovy ny masera fiarakodia mpitaiza Audi fiara Contact Now
Fikarakarana hoditra hoditra fiara Contact Now
Miaro ny seza amin'ny fiara ny fikolokoloana hoditra Contact Now
Ny fanadiovana kitay fiara Contact Now
Solon-tenan'ny solosaina Fikarakarana hikaroka ho an'ny fiara Care Solution Leather Solon-drivotra ho an'ny solosaina Solontenan'ny hoditra Solontenan'ny Controller mpanodina Solon-tena ho an'ny hoditra Fangatsiahana entin'ny solosaina